မိတ်ကပ် မကြိုက်ခြင်း၏ အားသာချက်လေးများ မိတ်ကပ်ထူထူ၊ ပါးနီ၊ နှုတ်ခမ်းနီ၊ ရှဲဒိုး စတာတွေ မလိမ်းတော့ဘူး ဆိုရင် သင့်အသားအရေ အတွက် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ် ဆိုတာကို သိပါသလား။မိတ်ကပ်လိမ်းတာဟာ အမည်းစက်တွေ မိတ္ကပ္ မႀကိဳက္ျခင္း၏ အားသာခ်က္ေလးမ်ား ဝက်ခြံတွေကို ဖုံးကွယ်ထားစေလို့ ပိုပြီးယုံကြည်မှု ရှိစေတာကြောင့် လူကြိုက်များကြပါတယ်ဒီလို မိတ်ကပ်ထူးထူမလိမ်းဘဲ နေမယ်ဆိုရင်ကော မျက်နှာ အသားအရေအတွက် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ် ဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ မိတ္ကပ္ မႀကိဳက္ျခင္း၏ […]
ဝက်ခြံနဲ့ အဆီကြိတ်ရှိတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် အကောင်းဆုံး မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း (၅) နည်း……
ဝက်ခြံနဲ့ အဆီကြိတ်ရှိတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် အကောင်းဆုံး မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း (၅) နည်း ဝက်ခြံနဲ့ အဆီကြိတ်တွေ ရှိလို့ ဘာသုံးသုံး မတည့်တာ၊ ပိုဆိုးသွားတာ မျိုးတွေ ဖြစ်နေပါ သလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ပျိုမေတို့ရဲ့ မျက်နှာကို ဓာတုပစ္စည်းတွေ ဝက္ၿခံနဲ႔ အဆီႀကိတ္ရွိတဲ့ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး မ်က္ႏွာေပါင္းတင္နည္း (၅) နည္းအရမ္းကို ခ်စ္တတ္ေပမယ့္ အခ်စ္ေရးမွာ ကံမေကာင္းဘူးဆိုတာ ဒီအခ်က္(၅)ခု ေၾကာင့္ပါ“Accept NUG ၊ Reject […]
ညဘက်ဆို အအိပ်နောက်ကျတတ်သူတွေဖတ်ကြည့်နော် အိပ်ယာဝင် နောက်ကျခြင်းက သင့်ကို အကြီးအကျယ် ရုပ်ဆိုးစေမှာပါ အိပ်ယာဝင်ချိန်နောက်ကျတာက တကယ်ကို မကောင်းပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသားအရေလှပမှု၊ ခန္တာကိုယ်ပြည့်ဖြိုးမှု၊ အရပ်ရှည်မှု၊ စိတ်ကြည်လင်မှု စတဲ့ အရာများစွာဟာ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ချိန်နဲ့ အဓိက သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အိပ်ချိန် အနည်းဆုံး ၇ နာရီရှိမှသာ ကျန်းမာရေးအတွက် သာမက အလှအပ အတွက်ပါ ညဘက္ဆို အအိပ္ေနာက္က်တတ္သူေတြဖတ္ၾကည့္ေနာ္စစ္မွန္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာကေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဝုန္းကနဲ လုပ္လို႔ရတဲ့ အရာမဟုတ္ပါဘူ၄၄ လမ္း […]
ခ်ိဳင္းေမြးေတြကို ရိတ္စရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင္း ကြၽတ္သြားေစမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား
ချိုင်းမွေးတွေကို ရိတ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်း ကျွတ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ နွေရာသီက ဂါဝန်လက်ပြတ် ၊ အကျႌလက်ပြတ် ၊ ဘောင်းဘီတို ၊ ဘီကီနီ တို့ဝတ်ရမယ့် အချိန်ပါ ။ ဒီအဝတ်အစားတွေ လှပေမယ့် ချိုင်း နဲ့ ခြေသလုံးရှိ အမွှေးတွေ ရှင်းနေမှ ကြည့်လို့လှပါတယ်။အမွှေးရိတ်တယ်ဆိုတာ အသားအရေကို ကြမ်းတမ်းစေတယ် ၊ ပြန်ပေါက်လာတဲ့ အမွှေးတွေက ကြမ်းလာတယ် ၊ အချိန်ခဏလေးနဲ့ ပြန်ပေါက် လာတယ်။ဒါကြောင့် မွှေးရိတ်တံနဲ့ […]
ထိပ္ေျပာင္တဲ့ေနရာမွာ ဆံပင္ျပန္ေပါက္လာေစမယ့္ သဘာဝနည္းလမ္း
ထိပ်ပြောင်တဲ့နေရာမှာ ဆံပင်ပြန်ပေါက်လာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း အသက်ကြီးလာရင် ထိပ်ပြောင် တာမျိုး ဖြစ်လေ့ရှိ တာပါပဲ။ ဒီလိုထိပ်ပြောင် တဲ့နေရာမှာ ဆံပင်ပြန်ပေါက် လာစေဖို့ ကူညီပေးမယ့် သဘာဝ နည်းလမ်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ ထဲကမှ လူတိုင်းလုပ်ရတာ အဆင်ပြေမယ့် နည်းလမ်းတချို့ကို ရွေးပြီး ပြောပြပေးလိုက် ပါတယ် ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးကို ရွေးလုပ်လို့ရပါတယ်။ အသက်ငယ်ပြီး ဆံပင် အရမ်းကျွတ်လို့ ထိပ်ပြောင်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း […]
​ခေါင်းပေါ်က ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဗောက်တွေကို သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ ဗောက်ဆို တာက အသက်အရွယ်မရွေး၊ ယောကျာ်းမိန်းမ မရွေးဖြစ်ပေါ် နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဗောက် ထလာပြီဆိုရင်တော့ နောက်ဆက် တွဲဆိုးကျိုးအနေနဲ့ဦးရေပြားခြောက် လာမယ်၊ ဆံပင်တွေ ကျွတ်လာ မယ်၊ အဆိုးဆုံးကတော့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ကျဆင်း လာမှာဖြစ် တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဗောက်ပျောက်အောင် သဘာဝ နည်းလမ်းနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ဆက်ဖတ်ကြည့် ရအောင်နော်။ ၁။ လက်ဖက်အဆီ […]
ဆီပူေလာင္ရင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါက အမာ႐ြတ္ေတာင္မက်န္ေစတဲ့ သဘာဝနည္း
ဆီပူလောင်ရင် ချက်ချင်းလုပ်ပါက အမာရွတ်တောင်မကျန်စေတဲ့ သဘာဝနည်း ဆီပူ ၊ရေနွေးပူ တို့နဲ့အမြဲတစေ ထိတွေ့နေရသော အိမ်ရှင်မများအတွက်…. ဒီနည်းလေးက တကယ့်ကိုအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီပူလောင်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၊ ဆေးနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ် ဆိုပေမယ့် အခုဖော်ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးကတော့ ထူးခြားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။ နည်းလမ်းကရိုးရှင်းလွန်းလို့ လျှော့မတွက်နဲ့နော်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ။ သူကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ လက်တွေ့နည်းပါလို့ပြောပါရစေ။ ဆီပူလောင်ခဲ့သော်…. ဆီပူလောင်သည့်နေရာ ကို ဆီစိမ်း (အသုံးမပြုရသေးသည့်ဆီ)ဖြင့် ရွှဲနစ်နေအောင် ချက်ချင်းလိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်ခန့်ကြာလျှင် သက်သာပျောက်ကင်းသွာပါလိမ့်မည်။ ရေကြည်ဖောင်းမထ အမာရွတ်ကျန်ခဲ့မှာစိုးရိမ်စရာမလိုသည့်အတွက် […]
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားေရးတဲ့ ရည္းစားစာ..ဘဝအေမာေတြ ေျပေပ်ာက္ၾကပါေစ…
မပြုံးဘဲ ဝါးလုံးကွဲ ရယ်နိုင်ကြကာ ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်ကြပါစေ) ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဆိုပေသည့်အထင်တော့မသေးနဲ့ တောက်မယ့် ဂတ်စ်မီး တရွှီးရွှီးဆိုသလို(အခုခေတ်က ဂတ်စ်မီးသုံးနေကြပြီး)၊ငယ်ငယ်ထဲက စာပေဝါသနာပါတာ။ဒါပေမယ့် ဒီကောင်စာရေးတော့ တော်တယ်။ လူပျိုပေါက်အရွယ်ရောက်တော့ ဒီကောင်စိတ်ကလှုပ်ရှားနေပြီ။ ရည်းစားစာတွေဘာတွေ ရေးတတ်နေပြီ ..တစ်နေ့တော့ ရပ် ကွက်ထဲကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုရည်စားစာပေးလိုက်တာဟိုကောင်မလေးက ဘုမသိ ဘမသိနဲ့သူ့အမေသွားပြလို့ သူ့အမေကဆ ရာတော်ကိုလာလျှောက်တယ်။ ဆရာတော်ကိုလျှောက်တော့ ဆရာတော်က အေးအေး ငါဆုံးမထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးစာရွက်ကိုသက်သေအဖြစ် ယူထားလိုက်တယ်။ ညဘုရားဝတ်ပြုပြီးတော့ သြဝါဒပေးတယ်။ လိမ်လိမ်မာမာနေဖို့နဲ့ စာကြိုးစားဖို့ပါပဲ ခဏနေတော့ ဆရာတော်ကကျောင်း […]